कृष्ण कंडेलमाथि सत्रु लागे भन्दै गायिका बिमाकुमारी दुरा आक्रोशित, इन्द्रेणीलाई एकै दिन यति ठुलो क्षति! (भिडियो) – Namaste Host
कृष्ण कंडेलमाथि सत्रु लागे भन्दै गायिका बिमाकुमारी दुरा आक्रोशित, इन्द्रेणीलाई एकै दिन यति ठुलो क्षति! (भिडियो)
March 27, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on कृष्ण कंडेलमाथि सत्रु लागे भन्दै गायिका बिमाकुमारी दुरा आक्रोशित, इन्द्रेणीलाई एकै दिन यति ठुलो क्षति! (भिडियो)
यतिबेला नेपाली साङ्गेतिक आकाशमा हरेक देश तथा विदेशमा रहनुहुन नेपालीहरूका लागि चर्तित नाम हाे इन्द्रेणी । नेपाली लोक दोहोरी इतिहासमै सर्बाधिक हेरिने कार्यक्रम इन्द्रेणीलाई यो बेला निकै शंकट सृजना भएको छ । युटुबमा प्रकाशन भएका अधिकंश कार्यक्रमलाई दैनिक जसो कपिराइट लाग्न थाले संगै यतिबेला कृष्ण कंडेल र इन्द्रेणी टिम तनाबमा छ।
आफुले चिनेको र नजिककै कलाकार बाट उक्त कार्य भएको भन्दै उनि मिडियामा आएका थिए । सो बिषयमा लोकप्रिय गायिका बिमा कुमारी दुराले आक्रोश सहित मिडियामा आफ्नो भनाई प्रस्तुत गरेकी छिन।
दुखि गरिबको सेवामा लागेको कार्यक्रमलाई नै यसरि सुनियोजित रुपमा पछाडीबाट आक्रमण भएको र यो सब पाप गरिरहेको समेत उनले भनेकी छिन। केहि दिन यता इन्द्रेणीलाई लागेको यो कपीराइटले सामाजिक कामलाइनै धरापमा राख्न लागेको भन्दै तत्काल यो गलत कदम सच्याउन आग्रह गरेकी छिन।
सोहि गीत अन्य रियालिटी सो मा गाउदा कुनै नियम र बन्धन नलाग्ने तर इन्द्रेणीलाई भने हरेक काममा अबरोध गर्न लाग्ने भन्दै नया प्रतिभा ल्याउने चौतारी माथी यसरी न खनिन र आफुले गरेको गल्तिलाई माफी माग्न समेत दुराले आग्रह गरेकि छिन । इन्द्रेणी अहिले हिमालयन टेलिभिजन मार्फत दैनिक प्रशारण हुन्छ भने युटुबमा पनि सर्बाधिक हेरिने गरिन्छ।
हेरौ यो बिशेष कुराकानी:
प्रिज्मा र प्रिन्सीले विवाह फागुन मै ‘बले’को यस्तो छ जवाफ हेर्नुहोस्
July 23, 2021 Bijay Lama